Shina Compact Wheat Mill Mill Millment and Factory | Chinatown
Ao amin'ny faritra fanadiovana dia mandray ny teknolojia fanadiovana karazana fanamainana izahay. Mazàna dia misy sivana in-2, fikorisa in-2, famonoana vato 2, fanadiovana indray mandeha, faniriana in-4, fanamainana 1 ka hatramin'ny 2, fanasarahana andriamby in-3 sns. Ao amin'ny faritra fanadiovana dia misy rafitra faniriana marobe izay afaka mampihena ny famaohana vovoka avy amin'ny masinina sy hitazomana ny tontolon'ny asa tsara. Ity dia takelaka mikoriana feno sarotra izay afaka manala ny ankamaroan'ny sisin-dàlana madinidinika, ny haben'ny afovoany ary ny sisin-dàlana tsara ao amin'ny varimbazaha. Ny faritra fanadiovana dia tsy mety amin'ny varimbazaha ampidirina amin'ny hamandoana ambany ary koa ny varimbazaha maloto mety amin'ny mpanjifa eo an-toerana.
Ao amin'ny sehatry ny fikosoham-bary, misy karazana rafitra efatra hanodinana ny varimbazaha ho lafarinina. Rafitra 4-Break, rafitra 7-Reduction, rafitra 1-Semolina ary rafitra 1-Tail. Ny purifiers dia natao manokana hahazoana semolina madio bebe kokoa. ho an'ny Reduction izay manatsara ny kalitaon'ny lafarinina amin'ny sisiny lehibe. Ny rolika ho an'ny rafitra Reduction, Semolina, ary Tail dia rolin-dronono izay voapoaka tsara. Ny endrika iray manontolo dia hanome antoka ny bran tsy dia afangaro ao anaty bran ary hampitomboina ny vokatra lafarinina. ny rafitra fananganana pneumatika tsara natao, ny fitaovan'ny fikosoham-bary manontolo dia nafindran'ny mpankafy fanerena avo lenta. Ny efitrano fikosoham-bary dia hadio sy ara-pahasalamana ho an'ny fananganana faniriana.
Amin'ity faritra ity dia hanome kabinetra fanaraha-maso elektrika izahay, tariby famantarana, tariby tariby ary tohatra fantsom-pifandraisana hafa, tsy ampidirina ny tariby fanodinana herinaratra sy motera afa-tsy ny mpanjifa takiana manokana. Ny rafitra fanaraha-maso PLC dia safidy tsy voatery ho an'ny mpanjifa. Ao amin'ny rafitra fanaraha-maso PLC, ny masinina rehetra dia fehezin'ny Programmed Logical Controller izay afaka miantoka ny masinina mihazakazaka milamina sy milamina. Ny rafitra dia hanao fitsarana ary hanao fanehoan-kevitra mifanaraka amin'izany raha misy milina diso na nijanona tsy ara-dalàna. Ampahatsiahivo ary ampahatsiahivo ny mpandraharaha handamina ny lesoka. Ny faritra elektrika andian-tsarimihetsika dia ampiasaina ao amin'ny kabinetra elektrika. Ny marika PLC dia Siemens, Omron, Mitsubishi ary marika iraisam-pirenena hafa. Ny fampifangaroana ny famolavolana elektrika tsara sy azo antoka dia miantoka ny fikosoham-bary manontolo mandeha tsara.
Moded Fahafahana (t / 24h) Roller Mill Moded Modely Sifter Space LxWxH (m)
CTWM-40 40 boky fampianarana Twin Sifter 30X8X11
CTWM-60 60 boky fampianarana Twin Sifter 35X8X11
CTWM-80 80 Pneumatika Plan Sifter 38X10X11
CTWM-100 100 Pneumatika Plan Sifter 42X10X11
CTWM-120 120 Pneumatika Plan Sifter 46X10X11
CTWM-150 150 Pneumatika Plan Sifter 50X10X11
Fitaovana fikosoham-bary vita amin'ny lafarinina
Aspirator fanodinana rivotra